Xaaskii Usama Binu Ladin oo kashiftay Sir weyn oo Dawladda Maraykanku Qarinaysay	| Salaan Media
Xaaskii Usama Binu Ladin oo kashiftay Sir weyn oo Dawladda Maraykanku Qarinaysay
Amal Sadaac Abdilfataax oo ah Xaaskii uu ka geeriyooday Sheikh Osama Bin Ladin oo ahaa Hoggaamiyihii Ururka Al-Qaacida ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka baxday Jawiga Aamusnaanta ayadoo Kashiftay sir dhowr nuuc ah oo aad uga yaabisay Caalamka, sidoo kalena waji gabax ku noqotay Dowlada Mareykanka oo sirtaan qarisay markii hore.
Waxey sheegtay xaaskani in rasaas iyo dagaal jilbaha la isku aastay kaasooo dhex maray ciidankii is baheysiga iyo ilaaladii Bin Ladin, ugu danbeyn la dhameeyay ilaaladii Bin Ladin oo ahaa kuwa yar tiro ahaan.
Bin Ladin oo markaas qolkiisa ku jiray ayey Xaaskiisu sheegtay in uu qoray soo qaatay isla markaana uu daaqada la aaday si uu rasaas uga rido, balse isla markiiba waxaa madaxa ka haleeshay rasaas socota, isagoo isla meshi ku dhacay naftuna uga baxday.
Xaaska Bin Ladin ayaa sidoo kale sheegtay in daqiiqad kadib ay askartu soo galeen guriga ayagoo qolka usii gudbay kadibna arkay shiikha oo meyd ah, dabadeedna si deg deg ah ula cararay diyaaradii gargaarka ee ay wateen, ayagoo si deg deg ah diyaarada ku kiciyay.
Arinka ugu yaabka badan ee Mareykanku uu qariyay ayeyse Xaaska Bin Ladin sheegtay in uu yahay kadib markii diyaaradii la kiciyay oo damacday in ay duusho ayaa waxaa qarax uu is qabsaday gabi ahaan diyaaradii taasoo halkii ku burburtay, ayadoo uusan qofna ka bad baadin.
Madaxweynaha Mareyka Brack Obama ayaa la sheegay in uu dhacdadaan daawanayay sida wax u dhacayeen oo TOOS ah, isagoo isla markiiba amray in arinta laga been abuuro oo caalamka loo sheegay in Osama la dilay, balse meydkiisa BADDA lagu riday.
Arintaan ayaana Caalamka oo idil ay rumeysan waayeen, maadaama in ka badan 10-Sanno ay Mareykanku baadi goobayeen, meydka Bin Ladin si ay caalamka u tusaan una sheegtaan in ay ka adkaadeen codowgooda koowaad ee ay ku tilmaamaan Al-Qaacida.
Isku soo wada duuboo hadalka Xaaskii Bin Ladin ayaa durbadiiba waxaa dunidu isugu faafisay si xad dhaaf ah, maadaama sirtaan iyo sida wax u dhaceen ay dowlada Mareykanka dhabar jab ku tahay, waxaana Saxaafadda Caalamku ku tilmaameen hadalka Xaaska Bin Ladin in uu yahay midka ugu Macquulsan ee la rumeysan karo, balse in Mareykanku uu Osama Bin Ladin dilo hadana Meydkiisa badda ku daro aysan aheyn wax la aamini karo.
Xaaska Bin Ladin ayaana sheegtay in ay ilaahey uga mahad naqeyso sida uu u asturay iimaamkeedii sidoo kalena ay ku sheegtay geesi Muslimiintu ku faani doonto, ayadoo intaas ku dartay in ilaahey ka shifay sirta iyo hadafka ay gaaladu maleegeen, kaasoo ahaa in indhaha caalamka la tuso Bin Ladin oo meyd ah.